नगरपालिकाद्धारा आश्रमलाई सहयोग - Darpan News
नगरपालिकाद्धारा आश्रमलाई सहयोग
२०७७, २० बैशाख शनिबार २०:२१
विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले सरकारले लागु गरेको लकडाउनको बेला राइनास नगरपालिकाले आश्रमलाई सहयोग गरेको छ । नगरको वडा नं. ८ मा रहेको ज्येष्ठ नागरिकआश्रमलाई नगरपालिकाले खाद्यन्न सामग्री सहयोग गरेको हो । आश्रमलाई पचास हजार बराबरको दाल,चामल, आलु, चना, केराउ ग्यास, नुन तेल, चिनि, चियपत्ति, मसला लगायतका खाद्यन्न सहयोग गरेको नगर प्रमुख सिंहबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, लकडाउनका बेला यहाँ आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरुको दैनिकी सहज पुग्ने अपेक्षाले करिब एक महिना पुग्ने उक्त सामग्री वितरण गरेका छौं । त्यस्तै उहाँले भन्नुभयो, सरसफाईमा सामग्री र एक थान पिपीई पनि आश्रमलाई सहयोग गरेका छौ. । नगरपालिकाले गरेको सहयोगले आश्रम सञ्चालनमा ठुलो राहत मिलेको आश्रमका अध्यक्ष कृष्णराज ओलियाले बताउनुभयो । यस आश्रममा १५ जना जेष्ठ नागरिक रहेका छन् । उनीहरुको हेरचार आश्रममा रहेका ३ जना सहयोगीहरुले गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै बेसीशहरमा रहेको मानवसेवा आश्रमलाई समेत सहयोग प्राप्त भएको छ । आश्रमलाई सहयोग गर्दै आएका करिब ४३ जनाले गरेको संयूक्त दाल चामल, नुन, तेल, लगायतका खाद्यन्न सामग्री सहयोग आश्रमलाई प्राप्त भएको हो । मुठिदानबाट सञ्चालनमा आएको यस आश्रममा रहेका मानवहरुलाई लकडाउनका बेला गुजारा चलाउनलाई सहज होस भनेर सहयोग गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै बेसीशहर नगरपालिका ७ कै जुठबहादुर घिमिरे र उहाँको श्रीमती दु्रपति घिमिरेले आफूले पाएको वृद्र्धा भत्ताबाट पाँच हजार पाँच रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । आफ्नो केही इच्छा कटौति गर्दै आश्रममा सहज पुगोस भनेर केहि रुपयाँ भएपनि सहयोग गरिएको दम्पति घिमिरेको भनाई छ ।
आश्रमकी संयोजक अधिकारीले आश्रमलाई सहयोग गरेकोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङलाई खुसी हुँदै धन्यावद दिँदै भन्नुभयो, उक्त सहयोगले आश्रम सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ । यस आश्रम मुठिदानबाट सञ्चालन भएकाले यस्ता सहयोगले ठूलो महत्व राख्ने उहाँले बताउनुभयो । सर्वोत्कृष्ट जीवनःशाश्चत चिन्तन साँचो जीवन निर्माणद्घारा सञ्चालित मानवसेवा आश्रममा यतिबेला १८ जना वेवारिसे सडक मानवले आश्रय लिईरहेका छन् ।
२०७३ चैत १२ गतेबाट संञ्चालनमा आएको यस आश्रम मुठि दान, संघसंस्थाको सहयोग, विभिन्न व्याक्तिहरुले जन्मदिन, बिवाह, लगायत विभिन्न चाडपर्वको अवसरमा गरेको सहयोगबाट सञ्चालन भईरहेको मानवसेवा आश्रम लमजुङले जनाएको छ । लमजुङ जिल्ला २०७७ सालसम्म वेवारिसे सडक मानवमुक्त बनाउने यस आश्रमको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै वेवारिसे सडक मानवमुक्त नेपाल २०८२ सालभित्र बनाउने बताइएको छ ।